Iiprojekthi ezinomdla ezifumaneka kuGoogle Open Source | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inkampani yaseCalifornia uGoogle isungule iwebhusayithi entsha eyaziwa njenge Umthombo ovulekileyo kaGoogle. Eli phepha lewebhu libhekisa kwinkxaso apho zonke iiprojekthi zomthombo ovulekileyo ezenziwe yinkampani yeNtaba yeNtaba zihlanganisene emva kwesiqubulo esithi “Ukuzisa iteknoloji engcono kwihlabathi ngokukhuthaza umthombo ovulekileyo".
Isoftware yasimahla kunye nekhowudi evulekileyo imele isiseko sobuchwephesha kunye nombutho wenkampani yokukhangela, ezizezona zinto zisisiseko kuyo yonke into abayenzayo. Ngesi sizathu, kugqityiwe ukuba kwenziwe ukumiliselwa kwale webhusayithi intsha, apho uza kufumana zonke iiprojekthi zemithombo evulekileyo eyenziwa nguGoogle kwasekuqaleni, ulwazi ngendlela abayisebenzisa ngayo, ukuyazisa kunye nenkxaso yoMthombo ovulekileyo. Ukongeza, ngokwewebhusayithi unokufumana ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-2.000 ezisebenzisa umthombo ovulekileyo, kwaye kweli nqaku sichaza iiprojekthi ezithile ezinomdla ezifumaneka kuMthombo oVulekileyo kaGoogle.
1 Impazamo eqhelekile
3 Izinto eziphathekayo ze-iOS
5 UZoffli, ucinezelo lwealgorithm
6 MOE (Yenza iVule ngokuLula)
Esi sixhobo siyilwe nguGoogle sisetyenziselwa fumana iimpazamo kwikhowudi yenkqubo ezibhalwe kwiJava. Yongezwa kulungelelwaniso lolwimi kwaye iyakwazi ukukhangela iibugs xa kuqokelelwa kwaye iyahambelana nayo nayiphi na into eyahlukileyo yeeplagi ekusetyenzisweni kweprojekthi.
Ngokungafaniyo nomhlanganisi wolwimi oqhelekileyo ofumana kuphela iimpazamo ekubhaleni, ngale projekthi unokufumana ulwazi ngakumbi, olunceda abaphuhlisi banamhlanje ukuba lungisa naziphi na iziphene ngokukhawuleza ukuba banokubona ukusebenzisa iTrone Prone.
Umsebenzi esiwongezelwa yiChannel usinika ukunceda umntu oyisebenzisayo ukubethela, ukubethela, ukusayina ngokwamanani nokujonga imiyalezo evela kwisikhangeli usebenzisa umthetho olandelwayo OpenPGP.
Izinto eziphathekayo ze-iOS
Le projekthi yenziwe ziinjineli kunye nabaqulunqi be-interface yenkampani kaGoogle, evumela abaphuhlisi be-iOS ukuba bongeze uyilo lwezixhobo kolu hlobo lwenkqubo.
Isixhobo esisetyenziselwa yabelana ngemisebenzi yokufundisana. Esi sixhobo sinika uncedo kumaqela asebenzayo aphuhlisa imisebenzi yokufundisa ekwi-Intanethi kwiwebhu.
UZoffli, ucinezelo lwealgorithm
Umahluko omelwe yile projekthi kukuba ngowona mthombo uvulekileyo. Ngaphandle kwexesha elithathwayo ukunyanzela, ngokungafaniyo neMicrosoft Edge, yamkela iBrotli, iyakwazi ukufezekisa amandla oxinzelelo, ifezekisa indawo ekhoyo, ixesha lokulinda elincinci xa kulayishwa iphepha lewebhu kunye nokuhanjiswa kwedatha ngokukhawuleza okukhulu.
MOE (Yenza iVule ngokuLula)
Isetyenziselwa ukungqamanisa, ukulungisa ingxaki, kunye nokuguqula indawo yokugcina ikhowudi yemvelaphi. Iiprojekthi ngokubanzi zikhona ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo, ke zinokubakho izizathu ezahlukeneyo. Yiyo loo nto Kulula kakhulu ukusebenzisa i-MOE, kuba iyakwazi ukugcina oovimba bobabini ndawonye, ​​ngaphandle kwesidingo sokuba bawele.
Enye iprojekthi enomdla enokufumaneka kuGoogle Open Source yiTensorflow. Imele ilayibrari yemithombo evulekileyo epheleleyo ngokwenzekelayo ngokwamanani ngokusebenzisa iitshathi zokuhamba kwedatha. Yiprojekthi ekwaziyo ukumisela ukuba kwenzeka ntoni emfanekisweni, ngokuchaneka kwe-94%.
Isixhobo esenzelwe sona Iifonti typographic. Xa ifonti yokubhaliweyo iguqulwa kusetyenziswa esi sixhobo, i-PDF iveliswa ibonisa ifonti ebisetyenziswa ngaphambi kotshintsho. Oku kwenza ukuba kube lula ukulungisa naluphi na utshintsho kunye neempazamo ezinokuthi ziveliswe ngabo.
Imele indlela ye chroot kwi-Chrome OS. I-Chroot inokuchazwa njengodidi lomatshini, apho inkqubo yokusebenza enesistim yefayile eyahlukileyo kunye nenkqubo yokubini ayisiyoyenkqubo yokusebenza esisiseko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iiprojekthi ezinomdla ezifumaneka kuMthombo oVulekileyo kaGoogle